Mark Gurman anoti hakuzove neApple chiitiko munaNovember | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 23/10/2021 18:00 | Noticias
ari zviitiko zveapuro vagara vari uye chichava chinhu chekunakidzwa vega kana neshamwari, kunyange kunonoka. Izvo zvigadzirwa zvitsva uye zvitsva zveBig Apple zvinoratidzwa zvakasikwa uye nemavhidhiyo anochengetwa zvakanaka kuti aite mharidzo inokwezva kupfungwa. Gore rapera Apple yakazivisa mutsara wakazara weMacs matsva uye yavo M1 chip pachiitiko chakakosha munaNovember. Zvisinei, Mark Gurman, Bloomberg guru, anovimbisa izvozvo hakuzove neatsva zviitiko zveApple kusvika 2022 uye hapana kuziviswa kwezvigadzirwa zvitsva kuburikidza nekuburitswa mumapepanhau.
Hatizove nezvigadzirwa zvitsva kusvika 2022 sekutaura kwaGurman
Nhau dzeApple yeiyi 2021 inoita kunge yasvika kumagumo. Mushure meSeptember yakakosha hurukuro yePhones uye iPads uye Gumiguru yeMacs, zvinoita sekudaro Pachave pasina zviitiko zvitsva kusvika muna 2022. Izvi zvakavimbiswa mune rimwe remabhuku ake achangoburwa nemumwe weanonyanya kukosha Apple nhau leaker Mark Gurman we Bloomberg.
Anotaura zvakare kuti panosvika Chivabvu kana Chikumi tichaona iyo nyowani M2 chip uye nyowani, inogadziriswazve MacBook Air. Ichi chigadzirwa chekupedzisira chichaona kumwe kwekugadziridzwa kwayo kukuru kubvira 2010 nechinangwa dhizaini zvakanyanya kune zvigadzirwa zvakapihwa neApple mumakore achangopfuura: off-chena bezels kutenderedza skrini uye huwandu hukuru hwemavara aripo, senge iMac iripo nhasi.
Gurman anotarisira iyi 2022 zvakare zvigadzirwa zvitsva pakati pazvo pane Mac mini, iyo iPhone SE uye iyo Pro Pro. Mune zviitiko zvakagoverwa mukati megore rose kuvhara kutenderera uko kwaizotanga nekugadziriswazve kweMacBook Air kutenderera yekutanga o yechipiri kota gore. Tinofanira kungomirira kuti tione kuti Gurman haana kukanganisa. Panguva ino, isu tichafadzwa nezvose zvigadzirwa zvitsva zvakaunzwa neApple mumwedzi ichangopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mark Gurman anoti hakuzove nechiitiko cheApple munaNovember
Apple yakatarisana nedambudziko rakakura muChina